သငျ့ကလေးငယျအား သူစိမျးတဈယောကျက ဆူပူကွိမျးမောငျးနခြေိနျ လုပျဆောငျသငျ့သညျ့ အခကျြ(၇)ခကျြ – One Daily Media
ဆူပူကွိမျးမောငျးနခြေိနျ လုပျဆောငျသငျ့သညျ့ အခကျြ(၇)ခကျြ
မိဘအမြားစုဟာ မိမိတို့ က‌လေးငယျမြားကို တဈပါးသူက ဆူပူကွိမျးမောငျးခွငျးမြိုး မကွိုကျမနှဈသကျကွပါဘူး။ ရုတျတရတျ ကွုံတှရေ့ခြိနျမှာ စိတျလိုကျမာနျပါ တုံ့ပွနျမိတတျပါတယျ။ ဒေါသအလြောကျ နှလုံးခုနျနှုနျးမြားမွနျလာပွီး
မသိစိတျမှပငျ “Fight or Flight response” မြား တုံ့ပွနျမိတတျပါတယျ။
ထို့အခွအေနမြေိုးမြားမှာ စိတျတညျတညျငွိမျငွိမျထားပွီး ခေါငျးအေးအေးဖွငျ့ စနဈတကဖြွရှေငျးပေးတတျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။
ပွသာနာ အခွအေနကေိုကောငျးစှာ နားလညျရနျကွိုးစားပွီး စကားဝိုငျးရဲ့ အရှိနျအနိမျ့အမွငျ့ကိုထိနျးပါ။သငျဟာ လူကွီးတဈ‌ယောကျအနဖွေငျ့ ဝငျရောကျပွောဆိုခွငျးဖွဈပွီး တဈဖကျလူကလဲ လူကွီးခငျြးလေးစားသမှုနှငျ့ ပွောဆိုရမညျဖွဈသောကွောငျ့ သငျ့ကလေးငယျအတှကျ လုံခွုံမှုကိုခံစားရစပေါလိမျ့မယျ။
တဈဖကျလူ၏ ရပျတညျခကျြနှငျ့ ကိုယျနဟေနျထား အတိုငျးအလိုကျသငျ့နပွေီး ထိုသူနဲ့အပေါကျလမျးတညျ့အောငျ အသှငျယူပွောဆိုခွငျးကလဲ ပွသာနာဖွရှေငျးရာမှာ နညျးလမျးကောငျး တဈခုဖွဈပါတယျ။
(၂) မတုံ့ပွနျမှီ အခွေ‌အနကေို သခြောသုံးသပျပါ
ဒေါသဟာ အဖွမေဟုတျပါဘူး။စိတျအေးအေးထားပွီး အခွအေနကေို ကြိုးကွောငျးဆီလြျောစှာ ရငျဆိုငျရပါမယျ။ သူတဈပါးကို ရိုကျနှကျခွငျး ၊ သူမြားပစ်စညျးကို ဖကျြဆီးမိခွငျး အစရှိသဖွငျ့ အမှားတဈစုံတဈခုကို သငျ့ကလေးက မတျောတဆ ပွုလုပျမိထားခွငျးမြိုးလဲ ဖွဈနိုငျခရြှေိပါတယျ။
သငျ့ရဲ့ စိတျထငျရာ ယူဆခကျြတှကွေောငျ့ တဈဖကျလူကို ရနျလိုနမေိတတျပါတယျ ။
(၃) ကလေးကို နားလညျအောငျရှငျးပွပါ
ကွောကျလနျ့နမေညျဖွဈသော သငျ့ကလေးငယျကို စိတျရှညျရှညျထားပွီး သူ၏ခံစားခကျြမြားကို နားလညျအောငျကွိုးစားပေးပါ။ ကလေးနှငျ့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျ မကျြစိတဈတနျးတညျး ထိုငျပွီး အဖွဈအပကျြကို ခြော့‌မော့ကာ မေးရပါမယျ။သငျ့ထငျမွငျခကျြတှအေစား ကလေးငယျတို့ပွောပွမညျ့ အဖွဈအပကျြမြားကို လေးနကျစှာနားထောငျပေးပါ။
(၄) တဈဖကျလူနှငျ့ ထိပျတိုကျဖွရှေငျးပါ
ထိပျတိုကျရငျဆိုငျခွငျးဟာ ရိုငျးစိုငျးသော အပွူအမူဟု ထငျရဖှယျရှိသျောလညျး လကျတှမှေ့ာ ဆိုးကြိုးထကျ ကောငျးကြိုးပိုမြားပါတယျ။
မိမိကလေး အမှားလုပျလြှငျ မိမိကိုယျတိုငျ သခြော စနဈတကဆြုံးမမညျဖွဈပွီး တဈဖကျလူဝငျမပါခွငျးမြိုးအတှကျ ကြေးဇူးတငျမိမညျဖွဈကွောငျး ရိုးသားယဉျကြေးစှာ တိုကျရိုကျပွောပွပါ။ အကယျ၍ထိုသူဟာလဲ မိဘတဈဦးဖွဈနမေညျဆိုပါက သားသမီးခငျြး ကိုယျစာတတျစရေနျ အကွံပေးရပါမယျ။
(၅) ဟာသမြားဖွငျ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖွရှေငျးပါ
အခွနေတေငျးမာလာပါက ရယျစရာဟာသ အခြို့ဖွငျ့ စိတျဖိစီးမှုမြားကို လြှော့ခပြါ။ပြျောရှငျ‌ ဖျောရှစှော ပွောဆိုခွငျးက စိတျခံစားခကျြမြားပိုမိုနီးကပျစသေလို ပွသာနာအပျေါ စိတျအလိုမကမြှုမြားလညျး လြော့နညျးစပေါမယျ။
သို့သျော အခနျ့မသငျ့လြှငျလညျး အဆိုပါရယျစရာဟာသမြားကွောငျ့ ပွသာနာပိုမို ကွီးမားသှားနိုငျသညျကို သတိပွုသငျ့ပါတယျ။
(၆) စညျး ကနျ့သတျထားပါ
အကယျ၍ ကလေး၏ ဆရာမ ၊ နညျးပွ ၊ ဆှမြေိုးသားခငျြး တဈဦးဦးက သငျ့ကလေးကို အလှနျအကြှံ ဆူပူကွိမျးမောငျးနပေါက ထိုသို့မပွုမူရနျ အကွံပေးပါ။ သငျ့ကလေးငယျ၏ စရိုကျနှငျ့ သငျ့အိမျမှာကငျြ့သုံးသော စညျးကမျးမြားကို ပွောဆိုညှိနှိုငျးပါ။ထိုနညျးဖွငျ့ သငျရဲ့ အမှနျအမှားခှဲခွားပုံ၊အမှားကို မညျသို့မညျပုံ အပွဈပေးပုံတို့ကို သငျ့ကလေးရဲ့အမွငျမှာ မွငျသာစပေါလိမျမယျ။
(၇) ကလေးကိုအကြိုးသငျ့အကွောငျးသငျ့ ရှငျးပွပါ
ပွသာနာမြားအနညျထိုငျသှားခြိနျမှာ ကလေးငယျအား စိတျအေးအေးထားကာ အကြိုးအကွောငျးသငျ့ ရှငျးပွပွောဆိုပါ။ သငျ့ရဲ့ ပွသာနာကိုငျတှယျဖွရှေငျးပုံဟာ သငျ့ကလေးငယျရဲ့ အမှားကြုးလှနျမိခွငျးအပျေါ ပွနျလညျပွုပွငျတတျစခွေငျး အလအေ့ကငျြ့အတှကျ ရရှေညျအကြိုးသကျရောကျမှုရှိပါတယျ။ ဥပမာ ” သား Jenny ရဲ့အရုပျကိုယူလိုကျမယျဆို သူဘယျလိုခံစားရမယျ ထငျသလဲ ? သားအရုပျကို Jenny က ယူရငျရော သားဘယျလိုခံစားရမလဲ ” စသဖွငျ့ ကိုယျခငျြးစာ ခံစားတတျအောငျ ရှငျးပွပွောဆိုပါ။
သူစိမျးတဈ‌‌ယောကျ၏ မညျသို့သော ဆုံးမသှနျသငျမှုမြိုးကို လကျခံပေးရမညျလဲ ?
သငျ့ကလေးငယျ မှားယှငျးသောအပွုအမူမြား မလုပျဆောငျမိစရေနျ လိုအပျသော လူမှုရေးစံနှုနျးမြားကို လကေ့ငျြ့သငျကွားပေးရနျ သငျ့မှာတာဝနျရှိပါတယျ။လူ့ပတျဝနျးကငျြမှာ အမြားနဲ့လိုကျလြောညီထှေ နထေိုငျတတျစရေနျ ၊ လူကငျြ့ဝတျမြား နားလညျနစေရေနျ ဆုံးမသှနျသငျ ပေးသငျ့ပါတယျ။ ဥပမာ စာသငျခနျးအတှငျး အမှားတဈစုံတဈခုပွုလုပျမိပါက ဆရာ၊ဆရာမမြားက ဆူပူအပွဈပေးနိုငျကွောငျ့ သငျ့ကလေးငယျ နားလညျအောငျရှငျးပွထားပါ။
ကလေးမြားအပျေါ ဒေါသဖွငျ့ဆူပူကွိမျးမောငျးခွငျးဟာ မိမိကိုယျကိုယုံကွညျမှုလြော့ကစြခွေငျး ၊ အလှနျအကြှံစိတျပူပနျတတျခွငျး အစရှိသညျ့ ဆိုးရှားသောအကြိုးသကျရောကျမှုမြားသာ သကျရောကျစပေါလိမျ့မယျ။
ကလေးမြားအပျေါ စိတျရှညျသညျးခံမှုနှငျ့ သငျ့တငျ့လြောကျပတျသော လေးစားမှုထားပေးရမညျမှာသာ ဖွဈပါတယျ။
‘Written One Daily Media
ဆူပူကြိမ်းမောင်းနေချိန် လုပ်ဆောင်သင့်သည့် အချက်(၇)ချက်
မိဘအများစုဟာ မိမိတို့ က‌လေးငယ်များကို တစ်ပါးသူက ဆူပူကြိမ်းမောင်းခြင်းမျိုး မကြိုက်မနှစ်သက်ကြပါဘူး။ ရုတ်တရတ် ကြုံတွေ့ရချိန်မှာ စိတ်လိုက်မာန်ပါ တုံ့ပြန်မိတတ်ပါတယ်။ ဒေါသအလျောက် နှလုံးခုန်နှုန်းများမြန်လာပြီး
မသိစိတ်မှပင် “Fight or Flight response” များ တုံ့ပြန်မိတတ်ပါတယ်။
ထို့အခြေအနေမျိုးများမှာ စိတ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီး ခေါင်းအေးအေးဖြင့် စနစ်တကျဖြေရှင်းပေးတတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ပြသာနာ အခြေအနေကိုကောင်းစွာ နားလည်ရန်ကြိုးစားပြီး စကားဝိုင်းရဲ့ အရှိန်အနိမ့်အမြင့်ကိုထိန်းပါ။သင်ဟာ လူကြီးတစ်‌ယောက်အနေဖြင့် ဝင်ရောက်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပြီး တစ်ဖက်လူကလဲ လူကြီးချင်းလေးစားသမှုနှင့် ပြောဆိုရမည်ဖြစ်သောကြောင့် သင့်ကလေးငယ်အတွက် လုံခြုံမှုကိုခံစားရစေပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဖက်လူ၏ ရပ်တည်ချက်နှင့် ကိုယ်နေဟန်ထား အတိုင်းအလိုက်သင့်နေပြီး ထိုသူနဲ့အပေါက်လမ်းတည့်အောင် အသွင်ယူပြောဆိုခြင်းကလဲ ပြသာနာဖြေရှင်းရာမှာ နည်းလမ်းကောင်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
(၂) မတုံ့ပြန်မှီ အခြေ‌အနေကို သေချာသုံးသပ်ပါ
ဒေါသဟာ အဖြေမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်အေးအေးထားပြီး အခြေအနေကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ရင်ဆိုင်ရပါမယ်။ သူတစ်ပါးကို ရိုက်နှက်ခြင်း ၊ သူများပစ္စည်းကို ဖျက်ဆီးမိခြင်း အစရှိသဖြင့် အမှားတစ်စုံတစ်ခုကို သင့်ကလေးက မတော်တဆ ပြုလုပ်မိထားခြင်းမျိုးလဲ ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။
သင့်ရဲ့ စိတ်ထင်ရာ ယူဆချက်တွေကြောင့် တစ်ဖက်လူကို ရန်လိုနေမိတတ်ပါတယ် ။
(၃) ကလေးကို နားလည်အောင်ရှင်းပြပါ
ကြောက်လန့်နေမည်ဖြစ်သော သင့်ကလေးငယ်ကို စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး သူ၏ခံစားချက်များကို နားလည်အောင်ကြိုးစားပေးပါ။ ကလေးနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် မျက်စိတစ်တန်းတည်း ထိုင်ပြီး အဖြစ်အပျက်ကို ချော့‌မော့ကာ မေးရပါမယ်။သင့်ထင်မြင်ချက်တွေအစား ကလေးငယ်တို့ပြောပြမည့် အဖြစ်အပျက်များကို လေးနက်စွာနားထောင်ပေးပါ။
(၄) တစ်ဖက်လူနှင့် ထိပ်တိုက်ဖြေရှင်းပါ
ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခြင်းဟာ ရိုင်းစိုင်းသော အပြူအမူဟု ထင်ရဖွယ်ရှိသော်လည်း လက်တွေ့မှာ ဆိုးကျိုးထက် ကောင်းကျိုးပိုများပါတယ်။
မိမိကလေး အမှားလုပ်လျှင် မိမိကိုယ်တိုင် သေချာ စနစ်တကျဆုံးမမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ဖက်လူဝင်မပါခြင်းမျိုးအတွက် ကျေးဇူးတင်မိမည်ဖြစ်ကြောင်း ရိုးသားယဉ်ကျေးစွာ တိုက်ရိုက်ပြောပြပါ။ အကယ်၍ထိုသူဟာလဲ မိဘတစ်ဦးဖြစ်နေမည်ဆိုပါက သားသမီးချင်း ကိုယ်စာတတ်စေရန် အကြံပေးရပါမယ်။
(၅) ဟာသများဖြင့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြေရှင်းပါ
အခြေနေတင်းမာလာပါက ရယ်စရာဟာသ အချို့ဖြင့် စိတ်ဖိစီးမှုများကို လျှော့ချပါ။ပျော်ရွှင်‌ ဖော်ရွေစွာ ပြောဆိုခြင်းက စိတ်ခံစားချက်များပိုမိုနီးကပ်စေသလို ပြသာနာအပေါ် စိတ်အလိုမကျမှုများလည်း လျော့နည်းစေပါမယ်။
သို့သော် အခန့်မသင့်လျှင်လည်း အဆိုပါရယ်စရာဟာသများကြောင့် ပြသာနာပိုမို ကြီးမားသွားနိုင်သည်ကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။
(၆) စည်း ကန့်သတ်ထားပါ
အကယ်၍ ကလေး၏ ဆရာမ ၊ နည်းပြ ၊ ဆွေမျိုးသားချင်း တစ်ဦးဦးက သင့်ကလေးကို အလွန်အကျွံ ဆူပူကြိမ်းမောင်းနေပါက ထိုသို့မပြုမူရန် အကြံပေးပါ။ သင့်ကလေးငယ်၏ စရိုက်နှင့် သင့်အိမ်မှာကျင့်သုံးသော စည်းကမ်းများကို ပြောဆိုညှိနှိုင်းပါ။ထိုနည်းဖြင့် သင်ရဲ့ အမှန်အမှားခွဲခြားပုံ၊အမှားကို မည်သို့မည်ပုံ အပြစ်ပေးပုံတို့ကို သင့်ကလေးရဲ့အမြင်မှာ မြင်သာစေပါလိမ်မယ်။
(၇) ကလေးကိုအကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ရှင်းပြပါ
ပြသာနာများအနည်ထိုင်သွားချိန်မှာ ကလေးငယ်အား စိတ်အေးအေးထားကာ အကျိုးအကြောင်းသင့် ရှင်းပြပြောဆိုပါ။ သင့်ရဲ့ ပြသာနာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံဟာ သင့်ကလေးငယ်ရဲ့ အမှားကျုးလွန်မိခြင်းအပေါ် ပြန်လည်ပြုပြင်တတ်စေခြင်း အလေ့အကျင့်အတွက် ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဥပမာ ” သား Jenny ရဲ့အရုပ်ကိုယူလိုက်မယ်ဆို သူဘယ်လိုခံစားရမယ် ထင်သလဲ ? သားအရုပ်ကို Jenny က ယူရင်ရော သားဘယ်လိုခံစားရမလဲ ” စသဖြင့် ကိုယ်ချင်းစာ ခံစားတတ်အောင် ရှင်းပြပြောဆိုပါ။
သူစိမ်းတစ်‌‌ယောက်၏ မည်သို့သော ဆုံးမသွန်သင်မှုမျိုးကို လက်ခံပေးရမည်လဲ ?
သင့်ကလေးငယ် မှားယွင်းသောအပြုအမူများ မလုပ်ဆောင်မိစေရန် လိုအပ်သော လူမှုရေးစံနှုန်းများကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန် သင့်မှာတာဝန်ရှိပါတယ်။လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အများနဲ့လိုက်လျောညီထွေ နေထိုင်တတ်စေရန် ၊ လူကျင့်ဝတ်များ နားလည်နေစေရန် ဆုံးမသွန်သင် ပေးသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ စာသင်ခန်းအတွင်း အမှားတစ်စုံတစ်ခုပြုလုပ်မိပါက ဆရာ၊ဆရာမများက ဆူပူအပြစ်ပေးနိုင်ကြောင့် သင့်ကလေးငယ် နားလည်အောင်ရှင်းပြထားပါ။
ကလေးများအပေါ် ဒေါသဖြင့်ဆူပူကြိမ်းမောင်းခြင်းဟာ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုလျော့ကျစေခြင်း ၊ အလွန်အကျွံစိတ်ပူပန်တတ်ခြင်း အစရှိသည့် ဆိုးရွားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများသာ သက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ်။
ကလေးများအပေါ် စိတ်ရှည်သည်းခံမှုနှင့် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော လေးစားမှုထားပေးရမည်မှာသာ ဖြစ်ပါတယ်။